ब्राजिलमा’ कोभिडको, दोस्रो लहर! एकै दिनमा १ हजार ६५६ भन्दा बढीको मृ :त्यु! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /International/ब्राजिलमा’ कोभिडको, दोस्रो लहर! एकै दिनमा १ हजार ६५६ भन्दा बढीको मृ :त्यु!
एजेन्सी । ब्राजिलमा कोभिड, १९ को दोस्रो लहरका कारण एकै दिनमा एक हजार ६५६ जनाको ज्या:न गएको बताइएको छ ।
योसँगै ब्राजिलमा अहिलेसम्ममा ज्या:न जाने व्यक्तिको संख्या ३ लाख’ १२ हजार भन्दा बढी पुगेको बताइएको ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।गत २४ घण्टामा मात्रै ४४ हजार ३२६ जना थप व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सं’क्रमण देखिएपछि यहाँ कूल संक्रमितको संख्या यहाँका १ करोड’ २५ लाख’ भन्दा बढी पुगेको पनि यहाँका स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले, जनाएका छन् ।
ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारीमा यहाँ पछिल्लो समयमा मृ:त्यु’हुने प्रतिशत पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यहाँ कोरोना,को नयाँ प्रजातिको भाइरसको पनि प्रकोप देखिएको ती अधिकारीले जनाएका छन् ।
ब्राजिलका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार यहाँका प्रति एक लाख जनामा ५ हजार ४८२ जनामा यो संक्रमण हुने गरेको छ । त्यस्तै यहाँका प्रति एक लाख जनसंख्या संक्रमणमा कम्तीमा पनि १३३ जनाको ‘ज्या:न जाने गरेको पनि बताइएको छ ।
ब्राजिलको साओ पाओलो शहर शुरुदेखि नै यो संक्रमणको एक किसिमले केन्द्र,विन्दुको रुपमा रहेको पनि पाइएको छ । यस शहरका स्वास्थ्य संस्थाहरु भरिएका छन् भने ती संस्थाका करिब ९१ प्रतिशत जति आकस्मिक कक्षहरु पनि भरिएका पाइएको’ छ । त्यसैगरी, यसअघि यहाँको मृ:त्यु दर पनि पहिले ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको बढी रहेकोमा पछिल्लो समयमा भने यहाँ कोरोना सं:क्रमणबाट ६० वर्षभन्दा कम उमेरका नागरिकको मृ:त्युको दर बढेको पाइएको” पनि बताइएको छ ।
हिमआँधीका कारण २३ जनाको मृत्यु : जनजीवन प्रभावित